How'd it happen and more reports?: နိုင်ငံခြားသုံးငွေစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက် အက်ဥပဒေ( Foreign Exchange Regulation Act)
နိုင်ငံခြားသုံးငွေစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက် အက်ဥပဒေ( Foreign Exchange Regulation Act)
(၁) နိုင်ငံခြားသုံးငွေစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်အက်ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသုံးငွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ( Controller of Foreign Exchange ) ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြု ချက်မရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူ မည်သူမဆို ပြည်တွင်းတွင် ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပတွင်ဖြစ်စေ မည်သူနှင့်မျှ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချ ခြင်း၊ ချေးယူခြင်း၊ ခေတ္တပေးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် လဲလှယ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။
(၃) နိုင်ငံခြားသုံးငွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ခွင့်ပြုလိုက်သော နိုင်ငံခြားသုံးငွေကိုသုံးစွဲရန် အကြောင်းကိစ္စအတွက် သာ လျှင်သုံးစွဲရမည်။ ထိုသို့သုံးစွဲခြင်း မပြုနိုင်ပါက ရယူထားသော နိုင်ငံခြားငွေကို လိုင်စင်ရဘဏ်သို့ ပြန်လည် ပေးအပ်ရောင်းချရမည်။
(၄) နိုင်ငံခြားသုံးငွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ၊ မည်သူမဆို မြန်မာပြည်အတွင်းမည်သည့် ရွှေ နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားငွေကြေး များကို ပြည်ပမှ ယူဆောင်လာခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း မပြုလုပ်ရ။
(၅) နိုင်ငံခြားသုံးငွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ၊ မည်သူမဆို မြန်မာပြည်မှ မည်သည့် ရွှေ၊ အဘိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာ လက်ဝတ်လက်စားနှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားငွေကို ပြည်ပသို့ ယူဆောင်သွားခြင်း၊ ထုတ်ယူပေးခြင်း မပြုလုပ်ရ။
(၆) မည်သူမဆို နိုင်ငံခြားသုံးငွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ၊ အာမခံစာချုပ်များကို ပြည်ပသို့ ယူဆောင်ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) အာမခံစာ ချုပ်များကို ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူ တစ်ဦးဦးအား မည်သို့မျှလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရ။
(၇) မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူ မည်သူမဆို (TRUST) ဖွဲ့စည်း၍ ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူ တစ်ဦးဦးအား ငွေများ၊ အာမခံစာချုပ်များ၊ ပစ္စည်းများ (TRUST) များကိုိ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း မပြုရ။
(၈) မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူ မည်သူမဆို နိုင်ငံခြားသုံးငွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ပြည်ပတွင် နေထိုင်သူများက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက် ၍ ဖြစ်စေ အုပ်ချုပ်ထားသော ကုမ္ပဏီများအား ငွေချေးငှားခြင်း မပြုလုပ်ရ။
(၉) ဤဥပဒေပါပုဒ်မတစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်သူ မည်သူမဆိုအား ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ် အထိ ကျခံစေနိုင်သည့် အပြင်၊ ငွေဒဏ်ကိုပါ တပ်ရိုက်စေနိုင်ပါသည်။
1.Except with the previous permission of the Controller, no person other than an authorized dealer shall in Myanmar, and no person resident in Myanmar other than an authorized dealer shall outside Myanmar, buy or borrow from or sell or lend to or transfer to or exchange with, any person not being an authorized dealer, any foreign exchange.
2.No person shall have dealings in foreign exchange at rates of exchange other than the rates for the time being authorized by the Central Bank of Myanmar.
3.Where any foreign exchange is acquired by any person other than an authorized dealer for any particular purpose, or where any person has been permitted conditionally to acquire foreign exchange, the said person shall not use the foreign exchange so acquired otherwise than for that purpose or, as the case may be, where any foreign exchange so acquired cannot be so used, the said person shall without delay sell or offer to sell the foreign exchange to an authorized dealer.
4.No persons shall, except with the general or special permission of the Controller bring or send into Myanmar any currency notes or bank notes or coin whether Myanmar or foreign.
5.No person shall, except with the general or special permission of the Controller or the written permission ofaperson authorized in this behalf by the Controller, take or send out of Myanmar any gold, jewellery or precious stones, or any currency or foreign exchange .
6.No person shall, except with the general or special permission of the Controller take or send any security to any place outside Myanmar.
7.Except with the general or special permission of the Controller, no person resident in Myanmar shall settle any property, otherwise than by will, upon any trust under whichaperson who, at the time of settlement, is resident outside Myanmar.
8.Except with the general or special permission of the Controller, no person resident in Myanmar shall lend any money either to any company which is controlled by persons resident outside Myanmar.
9.Whoever contravenes any of the provisions of this Act or any rule, direction or order made thereunder shall be punishable, with imprisonment foraterm which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
Fem Regulations Website Final Version 29-9-2014 -5 Myan by Than Han on Scribd